Ukundwendwela uMzimveliso-eQuanzhou Stamgon Trading Co, Ltd.
abantwana iinto zokubhukuda
abafazi abahamba ngesondo
isiqwenga esinye sokubhukuda
Yoga nxiba iseti
Malunga nomzi mveliso wethu wokudibana
Umzi mveliso wethu odibeneyo okhethekileyo kwimveliso yokuhlamba iimpahla kunye neengubo zemidlalo, ezinokulawula ngcono iindleko zemveliso, ulawule umgangatho wemveliso ukuya kubukhulu obukhulu, kwaye ukhawuleze impendulo ekuhanjisweni kwemakethi. Okwangoku, abasebenzi bangaphezulu kwama-2300 kumzi-mveliso, kwaye indawo yokusebenzela ingaphezulu kwe-4,000 yeekhilomitha.
Ekuqaleni kokusekwa kwale nkampani, iye yabeka iqela elilawulayo elinobuchule nelisebenza ngokusezingeni elifanelekileyo, yaseka inkqubo yemveliso ebanzi yemveliso, kwaye yatyala imali eninzi ekwaziseni imigca yemveliso eqhubekekayo, oomatshini bokuzisika abazenzekelayo, oomatshini abasasazayo kunye nezinye izixhobo ezikhokelayo. Kule mihla, iintlobo ngeentlobo zoomatshini bokuthunga iimpahla kunye nezixhobo zokushicilela ezincinci zifumaneka ngokulula. Kukho imigca yesi-6 yendibano yesiqhelo, ezingama-36 inaliti ezine kunye noomatshini abathandathu abangoomatshini abathandathu, ukukhutshwa kwenyanga kwezinto ezingaphezulu kwama-200,000.
Umzi-mveliso wethu uneengcali ezingaphezulu kwe-180, kunye ne-QC enamava exanduva lokuhlola ngexesha lokuveliswa kwaphakathi nangaphambi kokuba kuthunyelwe, qinisekisa ukugcina umgangatho ophezulu kubaxumi.
Ukuxhasa ii-odolo ezincinci ezivela eAmazon okanye abanye abathengisi abancinci, silungiselele isitokhwe esaneleyo phantse kuyo yonke uyilo kwindawo yokugcina iimpahla enokuhanjiswa ngeentsuku ezimbalwa, siyakwamkela ngokufudumeleyo ukuba undwendwele inkampani yethu ukuze uqhubeke nokuxoxa ngeshishini ukuba kunokwenzeka.
Idilesi: Igumbi 905, iRongtaian Building, No.139 Jinhuai Street, Quanzhou, Fujian, China